Nkuzi nke Android site na ntinye: nweta ihe kacha na ekwentị gị | Gam akporo (Peeji nke 8)
Olu WhatsApp ka ederede, ma ọ bụ otu esi agụ ụda na-erute anyị na WhatsApp
Gam akporo Oreo na-hụrụ naanị na 12% nke ngwaọrụ
Fragmentation na gam akporo kwụsịrị ịdọta uche anyị ebe ọ bụ, ihe fọrọ nke nta, ụdị mbụ nke sistemụ arụmọrụ Google. Na a The ahịa òkè nke ọhụrụ dị version nke gam akporo, Android Oreo, bụ naanị 12%, fọrọ nke nta otu afọ mgbe ya igba egbe.
Google Assistant na-enye ohere oku vidiyo
O kwere omume ugbu a ịkpọ oku vidiyo na Google Assistant. Choputa ihe banyere ihe ohuru abiara na Google Assistant.
Igbutu ahihia na-ekpori ndụ na Mowy Lawn
Moly Lawn bụ egwuregwu nkịtị nke ị ga-egbutu nnukwu ikpo nke ubi. Onye cutter ga-abụ ezigbo enyi gị.
Nke a na-enweghị mgbọrọgwụ ngwa drawer !!
Esi gbanye gị mobile ificationsma Ọkwa n'ime ihe ncheta na PushMe
PushMe bụ ngwa na - akwụghị ụgwọ nke na - enye gị ikike ịgbanye ọkwa ngosi ka ọ bụrụ oghere maka ncheta ahaziri iche.
Google Play gbanwere atụmatụ nke search engine
Google Play weputara ihe ohuru maka igwe ihe ochicho ya. Chọpụta karịa gbasara imepụta ọhụụ anyị na-achọta na njin ụlọ ahịa nke ụlọ ahịa ahụ.
MIUI 10 bịarutere taa na ekwentị Xiaomi ọhụrụ
More Xiaomi phones melite na MIUI 10 taa. Chọpụta ihe banyere ụdị nke na-enweta nhazi mmezi nhazi.
Horizon na-akpọrọ gị gaa na "teknụzụ" ụwa ebe ị ga - ezere ihe mgbochi na ụgbọ mmiri gị
Horizon bụ egwuregwu nkịtị nke na-etinye gị na njikwa nke ụgbọ mmiri nke ga-ezere ihe mgbochi niile ọ ga-ahụ n'ụzọ ya.
Nyere Max aka site na ike ya na ndụ dị ịtụnanya, nnukwu ihe omimi dị egwu
Square Enix na-ewetara anyị nnukwu ihe omimi dị egwu na gam akporo anyị na Life bụ Iche, iji nyere Max aka na ike ya.
Ndụmọdụ kachasị mma maka Pokemon Quest
Ise na usoro iji merie na Pokemon Quest. Chọpụta aghụghọ ndị a iji bụrụ nke kachasị mma na egwuregwu Pokemon a ma ama.
Egwuregwu egwuregwu kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke igwu mmiri dị na Storelọ Ahịa Play ka ị budata ugbu a.
Ngwa ngwa maka gam akporo !!
Super Idle Cats bụ nnukwu ihe ọkpụkpọ iji mee nri nwamba kachasị amasị: ụdị mkpụrụ osisi niile
Super Idle Cats bụ ihe ọkpụkpọ nke ị ga-ewepụta mkpụrụ niile ị nwere ike iji ree ya na obodo pusi na-anụ ọkụ n'obi.
Ngwaọrụ gam akporo kacha mma iji mee oku vidiyo
Ihe ise kacha mma gam akporo iji mee oku vidiyo. Chọpụta ngwa ndị a nke ị nwere ike ịkpọ oku vidiyo.
GALAK-Z: Variant Mobile na-agbakwunye ihe nke RPG na ọgụ oghere MECHS
GALAK-Z: Variant Mobile bụ oghere egwuregwu RPG nke emere ka ọ gbarie na njirimara ma e jiri ya tụnyere PC na ụdị njikwa.
Egwuregwu BMX kachasị mma maka gam akporo
Ise BMX kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu BMX anyị nwere ike ịchọta na Storelọ Ahịa Play.
Enwe, ngwa nkata vidiyo na-ewu ewu iji gbochie gị na mkparịta ụka nke 15
Ugbu a ị nwere ike ịrị elu osisi dị iche iche na Monkey iji soro ndị ị na-amaghị kparịta ụka maka sekọnd 15 na isiokwu ọ bụla.
Samsung Galaxy Note 5 na-anata mmelite nche nke July 2018
Agbanyeghị na ụfọdụ ọdụ adịla n'ahịa ruo nwa oge, ụfọdụ ndị nrụpụta, gụnyere Samsung, echefubeghị kpamkpam ụlọ ọrụ Korea nke Samsung ka malitere ịmalite nchedo nchekwa maka Samsung Galaxy Note 5
Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu iji risịrị na ezumike a, Boxing Star bụ nke zuru oke yana eserese ngosi na akụkọ dị egwu.
Instagram na-anwale mmeghachi omume yiri nke Facebook na Akụkọ
Instagram na-anwale na Akụkọ Instagram ihe mmeghachi omume Facebook dịka ị nwere ike igosipụta onwe gị n'ụzọ ndị ọzọ.
Onye na-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ nke zombies na Super Awesome Hyper Freaking Zombie Run
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke egwuregwu zombie ma ọ bụ ihe nkiri, ị ga-etinyerịrị Super Awesome Hyper Freaking Zombie Run. Aha ogologo maka egwuregwu zombie ọzọ.
Bugharịa taịl nile ka ị na-agbanye bọl site n'otu akụkụ gaa na Portal Drop
Portal Drop bụ ezigbo egwuregwu izizi nke ị ga-eji tụọ mmetụta nke iwepụ ụfọdụ iberibe ma ọ bụ ndị ọzọ na nnukwu ọgụgụ.
Etu esi egwu egwuregwu PC gị na igwe gam akporo gị na Steam Link
Steam Link na-enye gị ohere igwu egwu egwuregwu Steam kachasị amasị gị na mkpanaka gam akporo gị ma ọ bụrụhaala na ị nọ n'otu njikọ mpaghara.
Egwuregwu nke ị ga - abụ eze nwanyị, Na - achị: Gị, a na - eji kaadi ọhụrụ 200 emelitere ya
Ighachị: Onye isi ya bụ egwuregwu akwụ ụgwọ pụrụ iche nke a na-ere maka 33% maka ụbọchị ole na ole iji mee ọbịbịa nke mmelite ahụ.
Storelọ Ahịa App nwere ego Google Play ugboro abụọ mana ọkara nbudata ya
Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-ebipụta na Storelọ Ahịa Ngwa nwere ego Google Play ugboro abụọ ọbụlagodi mgbe ọ nwere ọkara nke nbudata ya
SSR bụ egwuregwu egwuregwu siri ike ma sie ike
SSR ga - eme ka ị ghara ịma jijiji site na egwuregwu ya na nsogbu ahụ nwere ike idebe gị ndụ oge niile oge ị na - egwu ya.
July nche melite maka Galaxy S8 na S8 + dị ugbu a
Dị ka ọnwa ọ bụla, ụlọ ọrụ Korea amalitela sava ya iji melite ndị nnọchi anya ama ama nke ụlọ ọrụ maka mmelite nchedo dabara na ọnwa nke July 2018 maka Samsung Galaxy S8 na S8 + dị ugbu a.
Battlelands Royale na-esochi ntiwapụ nke PUBG na Fortnite, n'agbanyeghị na ọ bụ n'ọnọdụ dị iche
Zuru okè maka ngwaọrụ mkpanaka, Battlelands Royale bụ agha royale nke a na-eme echiche site n'elu.
Beta kacha ọhụrụ nke WhatsApp na-egosi nhọta nke ihe mmado
WhatsApp ga-enwe akwụkwọ mmado n'oge na-adịghị anya, beta na-esote na-egosi nhụchalụ na ụfọdụ data ndị ọzọ
MIUI 10 ruru ekwentị ọhụrụ Xiaomi iri abụọ na otu
21 Xiaomi igwe na-emelite MIUI 10. Chọpụta ụdị ndị na-aga ịnata mmelite nke oyi akwa nhazi.
Xiaomi weputara nwelite a na gam akporo Oreo nke Mi A1
Ihe dị ka ụbọchị 15 gara aga, a manyere ụmụ nwoke si Xiaomi ka ha wepu na sava ha mmelite kachasị ọhụrụ ha wepụtara maka otu ụlọ ọrụ Asia, eweghachila mmelite ahụ na gam akporo 8.1 nke ọnụahịa Mi A1 ya, mmelite nke nwere wepụ izu abụọ gara aga n'ihi nsogbu ọ gosipụtara.
Jiri oghere Karaz merie oghere: RPG, ụdị ọhụụ na obere arcade
Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu dịtụ iche na ndị ọzọ, Mmeri Karaz nwere ihe a niile na ihe ndị ọzọ dịka ọ bụ atụmatụ dabeere na ntụgharị RPG na egwuregwu egwuregwu.
A ga-eji ntụgharị asụsụ ibe weebụ emelitere Microsoft Edge. Chọpụta ihe banyere mmelite na-abịa na ihe nchọgharị n'oge na-adịghị anya.
Ofwa nke Tenis: aringgbagharị '20s na-akpọrọ gị gaa egwuregwu tennis kachasị mma maka gam akporo gị
Ofwa nke Tenis: 20 na-ebigbọ bụ egwuregwu tenis dị egwu maka ngwaọrụ gam akporo gị nke ị nwere ike iji ọtụtụ awa rụọ ọrụ iji mezuo ọrịa azụ gị.
Ngwa kacha mma eReader maka gam akporo
Ihe ise kacha mma eReader maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a iji gụọ eBooks na gam akporo.
Ọzọ ukporo ụtọ si Ketchapp: Cubriko na ya vector ndịna
Cubriko bụ ọhụụ ọhụrụ sitere na Ketchapp Games nke na-asọpụrụ ụlọ ọrụ ahụ na egwuregwu frenetic ahụ na ezigbo teknụzụ.
Ngwa kacha mma maka gam akporo TV
Ise kacha mma maka gam akporo TV, Chọpụta nhọrọ nke ngwa ndị a anyị nwere ike ibudata ugbu a na gam akporo TV.
Egwuregwu skateboarding kacha mma maka gam akporo
Ise egwuregwu skateboarding ise kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke skateboarding egwuregwu ị nwere ike ibudata ugbu a na gam akporo.
XBrowser, ma ọ bụ ihe nchọgharị ọzọ iji dochie Chrome na Firefox na 1MB nwụnye
1MB nwere XBrowser, ihe nchọgharị weebụ nke chọrọ ịghọ ezigbo ngbanwe maka ndị ọzọ ama ama dịka Firefox ma ọ bụ Chrome.
[Video] Duel nke ihe nchọgharị weebụ, anyị na-achọ ngwa ngwa
Onye Nwụrụ Anwụ Na-eje Ije: Worldwa anyị na-eweta apocalypse zombie na agbata obi gị ma ọ bụ obodo dịka Pokémon GO
Onye Nwụrụ Anwụ Na-aga Ije: Worldwa anyị na-eme ka agbata obi gị bụrụ ebe apocalyptic ebe ị ga-egbu ọtụtụ narị ndị na-agagharị.
Agbanahụ ụfọdụ ọnwụ na ogwe aka gị na-eri ahụ Clumsy Climber, nke ọhụrụ si Ketchapp
Na Climber Clumsy anyi aghaghi izoputa onwe anyi site na onwu site na mmiri iri nke anyi gha agha buru ihe ma oburu na anyi ejighi ogwe aka anyi.
Ihe edeturu Firefox: Ntuziaka ntinye ntinye na otu esi eji ya na PC na gam akporo
Ndụmọdụ bara uru nke m na-egosi gị otu esi etinye ihe ntinye ederede Firefox ọhụrụ na gam akporo yana PC yana ntuziaka bara uru iji.
Smashing Rush, onye ọzọ na-adịghị agwụ agwụ na-agba ọsọ na mmetụ nke ụdị «Parkour»
Na Smashing Run ị nwere ike ịme Parkour site na ihuenyo nke mkpanaka gị na egwuregwu na-adọrọ adọrọ na teknụzụ.
Mmelite nche July maka Galaxy J6 dị ugbu a na Spain
Mmelite nche nche mbụ maka Galaxy J6 dị ugbu a maka nbudata na Spain na Italytali, ịbụ mba ndị mbụ nabatara ya.
Gam akporo Auto akpaaka enyela anyị ohere ịnweta atụmatụ zuru ezu nke ama anyị
Mmelite na-esote nke gam akporo Auto ga-emesị mee ka anyị nweta ndepụta zuru ezu nke ekwentị mkpanaaka nke anyị echekwara na ama anyị.
Mee ụlọ gị dị egwu na Chills HorrorTown
Chills HorrorTown bụ egwuregwu egwuregwu nke isiokwu ya bụ otu n'ime ihe nkiri ndị ahụ na-atụ egwu nke nwere ike ịme oke egwu.
Otu esi egbochi gam akporo site na igbu ngwa ngwa
Galaxy A8 na A8 + (2018) malitere ịnata Android 8.0 Oreo
Galaxy A8 na A8 + (2018) melite gam akporo 8.0 Oreo. Chọpụta ihe banyere mmelite nke na-amalite iru ụdị Samsung abụọ ahụ.
PUBG Mobile nwere beta beta ugbu a na Playlọ Ahịa Play
A ga-ewepụta ọhụụ ọhụrụ nke PUBG Mobile n'oge na-adịghị anya mana ka ọ dị ugbu a ịnwere ike ịnwale ya na nyocha beta ọhụrụ ya
Etu esi eji Waze karia Google Maps na gam akporo Auto
Site na Waze beta ị nwere ike iji ya kama Google Maps na gam akporo Auto, iji nweta uru nke ụfọdụ data sitere na nke mbụ.
Chọpụta ụwa invertebrate na anwansi Flutter: Startlight
Flutter Starlight na-akpọrọ gị gaa ụwa anwansi nke nla na ọkụ na-efe ga-enyere gị aka itolite. Egwuregwu dị iche na ndị ọzọ.
LG Q6 malitere ịnata Android 8.0 Oreo
LG Q6 na-enweta mmelite na gam akporo 8.0 Oreo. Ndị ọrụ nọ na South Korea na-enweta mmelite gam akporo Oreo na mberede.
Etu esi gbanwee menu oke Android
A culinary puzzle na Push Sushi na ya fun Ezi ntụziaka
Push Sushi bụ mgbaghoju anya emere nke ọma ka ị nwee ike ịnụ ụtọ isi nri ahụ ụdị mba Japan ahụ. Free n'ihi na ị wụnye ya ugbu a.
Ulateomie Tony Hawk na skateboard na Epic Skater 2
Epic Skater 2 bụ egwuregwu skateboarding na-enye ntakịrị nnwere onwe ịgafe ọkwa ya. Mụta ollies ka mmeri.
Mepụta ọmarịcha aghụghọ na eserese sitere na mkpanaka gị na Canva
Site na Canva ị ga-enwe nhọrọ nke imepụta eserese dị egwu iji chepụta kaadị, ibe Facebook ma ọ bụ nchịkọta.
Choputa kpakpando na kpakpando na SkyView: soro mbara ala Mars na July a
July a dị mkpa n’ihi na Mars ga-agaru ụwa anyị nso. SkyView ga - enyere gị aka iso ya wee hụ ogo ya okpukpu atọ.
Kpochapu, nyochaa ma wuo na njem a nke a na-akpọ Space Pioneer
Space Ọsụ iszọ bụ ọhụrụ ikuku na oge ịse 'em elu na anyị na-ahụ na Google Play Store. Kpochapu, nyochaa ma wuo egwuregwu ohuru a.
A mma ọzọ ka Google Play Store
Ngwa kacha mma maka ngwa maka gam akporo
Ihe ise kachasị mma maka ngwa maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a na-eji atụmatụ a.
B EV Ọ B, Ọ B EX Ọ B EX Ọ B,, ihe na-eri ahụ, heterodox na ekwensu na-ekwu okwu nke nwere ọtụtụ ọkwa
Ọ BIL ỌR EX EXE bụ onye na-ebugharị ebumnuche nke na-anwale ihe ọhụrụ na ụdị platformer na-eti. Ọ bụrụ na ị bụ ndị agbụrụ nke ụdị ahụ, ọ dị mkpa
Site na ndị okike nke Candy Crush Saga biara Diamond Diaries Saga: Njikọ amara na imepụta ọla!
Diamond Diaries Saga bụ egwuregwu egwuregwu mgbaghoju anya ọzọ na-abịa na njirimara ọhụụ dịka ike ndọda na ọtụtụ ọtụmọkpọ ndị ahụ iji jikọta.
Egwuregwu Arcade kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu egwuregwu anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu arcade ị nwere ike ibudata na Storelọ Ahịa Play
Ngwa kacha mma gam akporo kacha mma iji zipu ego
Ise kacha mma gam akporo ngwa iji zipu ego. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a na-enye gị ohere izipu ego na ndị enyi.
Rocket Valley Tycoon na-akpọrọ gị tupu ọsọ ohere iji rọketi gaa stratosphere
Ọ bụrụ n'ọsọ oghere na azụmaahịa bụ ihe gị, ịnwere ike i emomi Elon Musk na Rocket Valley Tycoon, egwuregwu njikwa njikwa zuru oke.
Mkpa ọwa maka Telegram gị
Chebe agwaetiti gị na ndị nwụrụ anwụ Island Island: kụrisie zombies ma wuo turrets
See zombies, wuo turrets ma chebe agwaetiti gị na ndị nwụrụ anwụ Island Island, egwuregwu a ma ama maka PC na consoles ugbu a na ekwentị gị.
Uzo bu uzo mgbanwe iji muta otutu egwu
Musitude bụ ngwa ọhụrụ nke na - eme ka keyboard dị n’ime igwe wee bụrụ ngwa egwu eji amata ọtụtụ abụ.
WhatsApp ga-adọ gị aka ná ntị ma ọ bụrụ na ha ezitere gị njikọ dị ize ndụ
WhatsApp ga-adọ gị aka ná ntị banyere njikọ enyo. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ na-abịa na ngwa akụkọ na-emegide adịgboroja.
Huawei P9 na P9 Lite agaghị emelite gam akporo Oreo
A gaghị enwe gam akporo Oreo maka Huawei P9 na P9 Lite. Chọpụta karịa maka mmelite maka ekwentị ndị na-agaghị emesị bịa.
Igwu nonstop iji chekwaa onye ị hụrụ n'anya na Diggerman na-atọ ọchị
Diggerman bụ egwuregwu ọsọ ọsọ na nke ị ga - echekwa amaga gị nke ndị Rabid Mole jidere.
Etu ị ga-esi gbanye ntụgharị ihuenyo ọbụlagodi ngwa egwu akwadoghi
Etu ị ga-esi nwetaghachi ihe oyiyi WhatsApp ma ọ bụ faịlụ nke ihichapụ na ngwaọrụ gị
Anyị na-egosi gị otu ị ga - esi weghachite foto WhatsApp ehichapụ site na aghụghọ dị mfe nke ga - apụtaghị na ngwa nkata.
Egwuregwu ekwensu nke Ping Pong King: egwuregwu egwuregwu a na-echekwa nke ọma
Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji nkeji ole na ole jiri egwuregwu riri ahụ, nke a bụ Ping Pong King. Egwuregwu ngwa ngwa na nke ekwensu.
Onyinye kacha mma kacha mma - July 2018
Choputa onyinye kacha mma dị na Gearbest ma echefula na ngwaahịa ndị a nwere nnukwu ego na ụlọ ahịa a ma ama.
Mmelite a na gam akporo Oreo nke Galaxy J3 2017, J5 2017 na J7 2017 na-egbu oge
Mmelite a tụrụ anya maka njedebe nke Galaxy J3, Galaxy J5 na Galaxy J7 2017 ga-egbu oge maka ọnwa ole na ole rue Septemba
Samsung Go nke mbụ Samsung ga-abịa na Samsung Experience
Samsung ekwentị na gam akporo Go ga-enwe Samsung. Chọpụta ihe banyere ekwentị a site na akara Korea nke na-abịa n'oge adịghị anya.
Nweta amụma ihu igwe site na igodo nsoro ụzọ nke ekwentị mkpanaka gị na Navbar Weather
Navbar Weather bụ ngwa eji akwụ ụgwọ na-abịa na ebumnobi edobere na ogwe igodo ma mee ka ị mara ihu igwe.
Budata Raskulls: Online ugbu a: egwuregwu ọtụtụ egwuregwu sitere n'aka ndị okike nke Fruit Ninja
Raskulls Online chọrọ itinye akara nke njirimara ya na mgbochi ndị ahụ ga-egbochi ịgafe ọtụtụ narị ndị iro na egwuregwu ọtụtụ egwuregwu.
Etu esi etinye Xiaomi Mi Band 3 na Spanish
Facebook mara ọkwa na ọ kwụsịrị ịkwado atọ n'ime ngwa ya
Facebook ga-ewepu ngwa atọ site na njedebe nke ọnwa. Chọpụta karịa gbasara ngwa ndị a na-elekọta mmadụ ga-ahapụ.
Akụkọ 9 Asphalt: E mepeelarị ndebanye aha na Google Play
9 Egwurugwu: Legends pre-registration open on Google Play. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ọhụụ Gameloft na-abịa na gam akporo.
Etu esi wụnye Spotify Lite gọọmentị tupu ọ bịarute na Google Play
Xiaomi na-akwụsị mmelite ahụ na gam akporo 8.1 Oreo nke Xiaomi Mi A1
Wepụ mmelite ahụ na gam akporo 8.1 Oreo nke Xiaomi Mi A1. Chọpụta ihe banyere njehie ndị kpatara nke dugara na ndọrọ ego ya.
Ekwentị Nokia ga-emelite gam akporo P na August
Nokia ga-emelite ekwentị ya na gam akporo P na August. Chọpụta karịa maka mmelite nke ekwentị ndị ga-anata n'oge na-adịghị anya.
A malitelarị Spotify Lite na Playlọ Ahịa Google
Spotify Lite dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play. Choputa ihe banyere ngwa Lite nke egwu egwu a ma ama.
Ise egwuregwu kacha mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a nke sọọfụ egwuregwu maka gam akporo kachasị maka oge okpomọkụ a.
Ngwa kacha mma mgbazinye kacha mma maka gam akporo
Ise kacha mma mgbazinye ụgbọ ala maka gam akporo. Chọpụta ngwa ndị a ịgbazite ụgbọ ala na gam akporo.
Huawei P10 Lite na Mate 10 Lite melite gam akporo 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo na-abịa Huawei P10 Lite na Mate 10 Lite. Chọpụta ihe maka mmelite nke na-amalite iru igwe ekwentị.
Playz tinyere gị n'ihu webseries na ọdịnaya dijitalụ site na RTVE na ngwaọrụ gam akporo gị
RTVE amalitela ngwa ọhụrụ akpọrọ Playz nke na-enye ndị ọrụ ọdịnaya dị n'ịntanetị n'efu.
Egwuregwu gam akporo dabere na usoro TV
Anọ gam akporo egwuregwu dabeere na telivishọn usoro. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ndị a dabere na usoro TV dị na Storelọ Ahịa Play.
Ngwa kachasị mma maka Googlelọ Google
Ngwa ise kachasị mma maka ụlọ Google. Chọpụta karịa gbasara ngwa ndị a anyị nwere ike iji wepụta ihe n’ikwu okwu Google.
Were otutu igwe rọketi na mbara elu ụwa na Space Frontier 2
Y’oburu na ichoro ighari na mbara igwe, n’ezie Oghere Oghere 2 bu ezigbo nke g’enweta igba egbe nke oghere rọketi.
Huawei ga-emelite ekwentị asaa na gam akporo Oreo
Asaa Huawei na Honor phones ga-emelite gam akporo Oreo. Chọpụta karịa gbasara ụdị ọhụụ ndị ga - enweta mmelite a.
Cochịkwa ma kpụọ mbara ala dị na TerraGenesis, egwuregwu atụmatụ a gaghị efu
TerraGenesis na - akpọrọ gị gaa na ụwa niile ka ị nwee ike ịkọwa mbara ala na mmepeanya gị na ndị ị na - achị.
"Dị "Lite" kachasị mma nke ngwa ndị ama ama na netwọkụ mmekọrịta
N'ime ụdị "Lite" niile nke ndepụta a, anyị nwere nke ọhụrụ maka Instagram, nke Google Maps ma ọ bụ nke Facebook.
Instagram Lite: versiondị maka ekwentị mkpanaaka nwere obere nchekwa
Instagram Lite dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play. Chọpụta ihe banyere ụdị dị mfe nke ngwa a ma ama nke na-erughị 200 kb.
You ma awa ole ị nọrọ na Netflix? Statflix ga-agwa gị
Na StatFlix anyị ga-enwe n'aka anyị na anyị nwere ike ịmara awa ole anyị na-eji otu ụbọchị na Netflix na nke bụ usoro kachasị amasị anyị.
Pokémon Quest na-abịa na gam akporo: ihe odide kachasị amasị gị ghọrọ cubes
Pokémon Quest dị ugbu a na gam akporo dị ka egwuregwu egwuregwu mara mma mara mma nke nwere usoro ahọpụtara nke ọma na nkenke.
Football Cup Superstars na-ewetara gị «Tiki taka» nke otu mba na gam akporo gị
Football Cup Superstars bụ egwuregwu vidio arcade nke chọrọ iji nke tiki taka ka ị nọrọ n'ihu onye na-eche nche ma nye goolu.
IGTV bụ ngwa Instagram iji wulite televishọn ọnụ
IGTV, site na nde ndị ọrụ Instagram nwere, nwere ike bụrụ igwe onyonyo onye ọ bụla wuru anyị niile.
Na-akpata ọnwụ na mkpụrụ obi iwe ihe ubi na ọnwụ Ọnwụ na-atọ ụtọ
Ọnwụ na-abata bụ atụmatụ izizi site na itinye gị n'akụkụ ọnwụ kama ịnwụ ndụ, dị ka ọ na-eme n'ọtụtụ egwuregwu.
Google Duo ga-akwụsị ịnara mmelite na ngwaọrụ na gam akporo jelii agwa
Ngwa oku ọkpụkpọ nke Google, Google Duo, agaghịzi enweta mmelite na ngwanrọ nke gam akporo jelii agwa.
Site na flowkey ị nwere onye nkuzi “na-ege ntị” iji kụziere gị otu esi akpọ piano
flowkey na-enye ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka nke na-etinye gị n'ihu onye nkụzi piano ga-ege ntị na ndetu ka ị wee mụta abụ.
Samsung ga - emelite ọtụtụ ekwentị ya na gam akporo Oreo na July
Samsung ga-emelite ọtụtụ ụdị gam akporo Oreo na July. Chọpụta ihe banyere mmelite na-abịa Samsung igwe ugbu a.
Facebook ga - egosi anyị oge anyị tinyere na ngwa ahụ
Facebook ga - egosi gị oge ole ị na - eji ngwa ahụ. Chọpụta karịa ọrụ ga-abịa n'oge na-adịghị anya na netwọk mmekọrịta iji jikwaa ojiji ị na-eme.
Etu esi eziga ozi na-egbu onwe gị na WhatsApp
Ejirila Microsoft Edge maka gam akporo ugboro ise
Microsoft Edge ruru nde nbudata ise. Chọpụta karịa ihe ịga nke ọma nke ihe nchọgharị ahụ na Storelọ Ahịa Play ebe ọ gafere nde ise.
Mmelite kachasị ọhụrụ na-enye nsogbu batrị na OnePlus 6
Igwe batrị OnePlus 6 na-agba ọsọ ọsọ ọsọ. Chọpụta karịa maka ọdịda a na-abịa mgbe ọhụụ OxygenOS ọhụrụ dị na njedebe dị elu,
Ihe ncheta June maka Galaxy S9 na S9 + dị ugbu a
Mmelite nche S9 na S9 + maka June 2018 dị ugbu a maka nbudata na Europe.
Egwuregwu SEGA kachasị mma maka gam akporo
Chọpụta nhọrọ nke egwuregwu SEGA anyị nwere ike ibudata na gam akporo. Gụnyere SEGA Forever egwuregwu dị na Storelọ Ahịa Play.
Ngwa kachasị mma iji tụnyere ụlọ nkwari akụ na ọnụahịa ụgbọ elu
Ise Android ngwa iji tụnyere ụlọ nkwari akụ na ụgwọ ụgbọ elu. Chọpụta ngwa gam akporo ndị a iji jiri oge ezumike gị.
Jiri Smule buo abụ ma obu otu na Smule, ngwa eji eme ka amara olu gi
Enwere ngwa ole na ole yiri Smule, ebe ọ na - enye gị ohere ịbù abụ n'otu duet ma ọ bụ n'otu otu ma si otu a gosipụta olu mara mma ị nwere.
Ezigbo izu ike ụda kacha mma maka gam akporo
Ise ntụrụndụ na-ada ụda ngwa maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke ngwa ụda izu ike dị ugbu a
Lenovo Tab 4 ga - emelite gam akporo 8.1 Oreo na November. Chọpụta ihe banyere mmelite na-abịa na mbadamba ndị a.
Igwu gị egwuregwu online na Mobcrush, a dum obodo na-echere gị
Mobcrush bụ obodo ndị na-eme egwuregwu nke e ji ikwe ka ọtụtụ puku ndị egwuregwu na-egwu egwuregwu egwuregwu ịntanetị.
Ihe ntinye nke June maka Galaxy Note 8 dị ugbu a na Europe
Mmelite nchedo nke ọnụahịa ndị a na-ejikwa gam akporo bụ eziokwu nke na ọ nweghị onye nwere ike ileghara anya, n'agbanyeghị ...
WhatsApp ga-ewebata mmeghachi omume na akwụkwọ mmado na ngwa ahụ
WhatsApp na-arụ ọrụ ugbu a na mmeghachi omume na akwụkwọ mmado. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ nke ga-abịa na ngwa izipu ozi amalitela iji akwụkwọ mmado
Google Play emeelarị ka ọ dị mfe ịkagbu ndenye aha
Google Play na-ewebata ngalaba iji jikwaa ndenye aha. Chọpụta ihe banyere ngalaba ọhụrụ a nke na-enye anyị ohere ịhụ ndebanye aha anyị nwere
N'ikpeazụ-abịa na ihe "onwe" aka Google nnyemaaka
Echiche bụ na na "ụlọ" nke Google Assistant ị ga-ahụ ozi niile ịchọrọ ma ozugbo ị maara ihe niile na-echere gị n'ụbọchị.
Ngwa ndị ị na-enweghị ike ịchọta na Playlọ Ahịa Google ma ị gaghị echefu gam akporo gị
5 aghụghọ nke ọhụrụ PUBG Mobile melite nke ị leghaara anya
Ihe ọhụrụ PUBG Mobile melite na-ezo atụmatụ ise ọhụụ na-aghọ aghụghọ ise iji nweta nke ukwuu na nnukwu agha royale.
Adobe Spark Post na-abịa gam akporo na beta: mepụta eserese mara mma
Adobe Spark Post bụ ngwa gam akporo ọhụrụ nke na - ahapụ gị ka ịmepụta ihe osise mara mma iji bulite na mgbasa ozi mmekọrịta.
Etu esi bulite vidiyo kwụ ọtọ nke 1 hour na Instagram: nnukwu ihe ọhụụ nke netwọkụ mmekọrịta dị ebe a
Ọ bụ ihe gbasara nkeji na ịnwere nhọrọ iji bulite vidiyo elekere 1 na Instagram dị na ekwentị gị. Ọ na-abịa na ụfọdụ adịghị ike n'agbanyeghị.
Wayszọ 2 ịgbanwe akara ngosi na gam akporo
TuLotero: Ngwa igwu lọtrị ebe ọ bụla ị nọ
TuLotero: Kpoo lọtrị ebe ọ bụla n'agbanyeghị ebe ị nọ. Chọpụta ngwa a yana websaịtị ị ga - eji egwu lọtrị n’oge ọ bụla, ebe ọ bụla.
Google Pọdkastị dị ugbu a na gam akporo: ugbu a dị nde pọdkastị nde abụọ
Google pọdkastị na gam akporo na-enye gị ohere ịnweta ihe karịrị pọdkastị nde abụọ nke ndenye aha site na ngwa ngwa nke ọma na akụkụ anya.
Ndụmọdụ 5 Dị Mkpa Maka PUBG Mobile: Etu aga-esi bụrụ onye egwuregwu ka mma ma banye n’igwe ikpeazụ
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọkpụkpọ na-aga naanị gị na otu ma ọ bụ soro ndị enyi gị gaa PUBG Mobile, ndụmọdụ ise a ga-aba nnukwu uru na ọgụ.
Huawei P9 agaghị emelite gam akporo Oreo
Huawei P9 agaghị enweta mmelite ahụ na gam akporo Oreo. Chọpụta karịa gbasara mgbanwe a na atụmatụ ụlọ ọrụ nke juru gị anya na mkpebi a.
Egwuregwu Westworld maka mmalite Android na June 21
Egwuregwu egwuregwu nke usoro Westworld a ma ama na-eru nso, anyị ga-agwa gị ihe ọ bụ na otu ị ga-esi nweta onyinye
Pokémon Gaa ịme ihe na ahia Pokémon
Pokémon Go na-ewebata mgbanwe n'etiti ndị enyi. Chọpụta karịa banyere mgbanwe na-abịa na egwuregwu Niantic nke ga-eme ka ndị nkuzi bụrụ ndị enyi.
Nwelite Mobile PUBG ọhụrụ: echiche mmadụ izizi, ọnọdụ "Obere Mpaghara" ọhụrụ na ọtụtụ ndị ọzọ
Mgbe ị natara ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke Miramar izu ole na ole gara aga, PUBG Mobile nwetara mmelite ahụ na ọnọdụ onye mbụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Okwu a zuru ezu ma dị ugbu a RSS ndepụta na imewe
Ọ bụrụ na ike gwụrụ gị nke nri ma ọ bụ gReader nke ochie, Palabrare bụ ezigbo agụ RSS na-agụ maka ọdịdị ya dị mma yana atụmatụ.
Soro World Cup Soccer na Stickman Soccer 2018 kpoo
Usoro nke a na - akpọ Stickman Soccer 2018 dị ebe a dị ka egwuregwu egwuregwu arcade nke ị nwere ike igwu egwu ngwa ngwa mgbe ị na - ele iko ụwa.
Jurassic Hopper, a nkịtị «Jurassic» a la Crossy Road
Ọ bụrụ na dinosaurs bụ ihe gị, ya na Jurassic Hopper ị ga-enwe ọtụtụ ihe na-eche gị ka ị kwụsị ndụ gị na ezigbo "nkịtị".
Samsung na-enye ohere ịhazi ụda ozi
Ọhụrụ melite na Samsung na-eme ka ndị ọrụ niile nwee ọnụ ya na gam akporo Oreo bụ ikike ịhazi ụda nke ozi ahụ.
Nkọkọ malitere ụdị Aquos S3 na gam akporo One
Sharp Aquos S3 na gam akporo ore malitere na South Korea. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụrụ nke ekwentị na-ebupụta na Asia.
Ihe ncheta kachasị mma maka gam akporo
Ihe ncheta kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta ngwa ise a na echetara gị ụdị iche dị na Storelọ Ahịa Play.
The OnePlus 6 na-enweta mmelite iji dozie ntụpọ nche achọpụtara
A na-emelite OnePlus 6 iji dozie ntụpọ nchebe ya. Chọpụta karịa gbasara OxygenOS melite na-akụ elu-ọgwụgwụ.
Ngwa kọfị kacha mma maka gam akporo
Ihe ise kacha mma kọfị maka gam akporo. Chọpụta karịa gbasara ngwa kọfị ndị anyị nwere na Storelọ Ahịa Play.
Egwuregwu golf kacha mma maka gam akporo
Ise egwuregwu golf kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu golf dị na Storelọ Ahịa Play taa.
Budata Igbe: vlanahụ mepụtara maka gam akporo ugbu a
Nwere ike ibudata Igbe: vlanahụ mepụtara maka gam akporo site ugbu a, ọ bụ n'efu ma na-agba n'ọtụtụ ngwaọrụ
Sony iji mepụta nnọchi maka Xperia Home
Sony na-arụ ọrụ na oyi akwa iji dochie Xperia Home. Chọpụta ihe banyere akwa ọhụrụ nke ga-abịa na ekwentị nke akara Japanese.
Xiaomi Mi A1 malitere imelite na gam akporo 8.1 Oreo
Android 8.1 Oreo malitere ịbịaru na Xiaomi Mi A1. Chọpụta karịa maka mmelite nke na-amalite iru mmalite ndị ọrụ beta ugbu a.
Kpoo gas na PAKO 2 iji kụtuo ndị uwe ojii
PAKO 2 na-etinye gị n’azụ ụgbọala iji gbanahụ ndị uwe ojii na-eso gị na ọtụtụ ụgbọ ala. Egwuregwu egwuregwu dị egwu na ọkwa eserese mara mma.
Echefula na iko ụwa na FMdB, nnukwu nchekwa data nke egwuregwu mara mma
Na FMdB ị ga-enwe n'aka gị ọdụ data bọọlụ kachasị na ụwa. A free ngwa na-enye gị ohere ịmata ihe niile nkọwa nke akụrụngwa.
Go gụgharia music player na free offline mode
Instagram ga - akwụsị ịgwa gị mgbe ị na - enweta nseta ihuenyo na akụkọ
Instagram agaghị agwa mgbe ejiri ndị mmadụ na akụkọ. Netwọk mmekọrịta wepụrụ otu n'ime ọrụ arụmụka ya. Chọpụta ihe.
Ihe ngosi, ngwa kachasị mma iji debe oge nke ịhụ nsọ
Iji Clue ị gaghị ajụ maka ọzọ, ebe anyị nwere ngwa kachasị mma iji chịkwaa oge ịhụ nsọ ma mara ụkpụrụ pụrụ iche.
Samsung Gear S4 ga - enwe batrị buru ibu karịa onye bu ya ụzọ
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na Gear S4 sitere na Samsung ga-akụ ahịa na nnwere onwe ka ukwuu, na-abawanye nke S4 3n 90 mAh.
Nnụnụ njem, ma ọ bụ mgbe ọ ga - emezi ihe bụ nnụnnụ flappy
Birdy Njem bụ egwuregwu dị elu dị egwu nke miri emi na nke akpọrọ "Casual". Ga-enwerịrị nnụnụ nwere omume enyi ka ọ pụọ na nsogbu.
WhatsApp ga-aga n'ihu na-enye nkwado maka gam akporo Gingerbread ruo 2020
Ngwa ngwa ozi WhatsApp a mara ọkwa na ọ ga-aga n'ihu na-akwado njedebe niile na-agba ọsọ Gingerbread ruo 2020.
Otu n'ime ngwa foto foto kacha mma maka gam akporo. AKPANKWU !!
Batrị nke 9 Galaxy Note ga-abụ 4.000 mAh
Dabere na nyocha ọhụụ, Galaxy Note 9 ga-ada batrị batrị 4.000 mAh, otu n'ime ihe ndị ọrụ chọrọ n'aka ụlọ ọrụ Korea.
Ntụgharị asụsụ Google na-anọghị n'ịntanetị ugbu a dị n'asụsụ 59
Google Translate na-emezi ntụgharị asụsụ na adịghị n'ịntanetị n'asụsụ 59. Chọpụta karịa banyere ndozi nke na-abịa site na iji ọgụgụ isi.
Android ga-enwe ọnọdụ gbara ọchịchịrị na mmelite n'ọdịnihu. N'abalị mode ga-emesị iru sistemụ arụmọrụ site na nwelite.
Galaxy S7 na S7 Edge na Spain mechara nata mmelite ahụ na gam akporo 8.0 Oreo. Free Samsung ntị ama imelite.
Sony na-akwụsị mmepe nke ụlọ Xperia ya
Sony hapụrụ mmepe nke mkpuchi ụlọ ya nke Xperia. Chọpụta karịa gbasara mkpebi ụlọ ọrụ iji dobe oyi akwa ya.
Instagram ga - ewebata YouTube nke ya n’izu na - abịa
Instagram ga-ewebata usoro vidiyo ya n'izu na-abịa. Chọpụta karịa maka ikpo okwu a nke na-achọ ịsọ mpi na YouTube.
Sony Xperia XZ2 nwere ike imelite ya na gam akporo P Beta 2
Sonylọ ọrụ Japan bụ Sony enyela anyị ohere ịwụnye gam akporo P Beta 2 na ngwụcha Xperia XZ2 niile.
LaLiga ngwa nledo na Ogwe iji igwe okwu nke ekwentị
Ngwa LaLiga na-arịọ maka ikike iji igwe okwu ekwentị. Chọpụta karịa gbasara esemokwu ikike ndị arịrịọ nke ngwa ahụ rịọrọ.
A na-emelite Gmail maka gam akporo na mmegharị ọhụụ
Gmail jiri mmegharị ahụ na-emelite ngwa gam akporo. Chọpụta ihe banyere mmelite na-abịa na akwụkwọ ozi ngwa.
Egwuregwu gam akporo iji nwee obi ụtọ n'izu a
Egwuregwu gam akporo anọ iji nwee obi ụtọ n'izu a. Chọpụta nhọrọ egwuregwu ndị a ị ga-eji nọrọ izu karịa n’ụzọ egwu.
Ngwa kacha mma biya maka gam akporo
Ise kacha mma gam akporo ngwa banyere biya. Chọpụta ngwa biya ndị a ị nwere ike ibudata ugbu a na Storelọ Ahịa Play na ekwentị gị.
Egwuregwu egwuregwu anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta egwuregwu ndị a, ụdị nke na-ewu ewu na oge.
Egwuregwu kacha mma The Walking Dead for Android
Ihe anọ kachasị mma The Walking Dead Games for Android. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu gam akporo dabere na usoro a maara nke ọma.
Ngwa kacha mma gam akporo maka ndị hụrụ mmanya n'anya
Anọ kacha mma gam akporo ngwa ọdịnala banyere mmanya. Chọpụta ihe banyere ngwa ndị a ga - enyere gị aka ịmatakwu gbasara mmanya.
Yahoo ozi ga-emechi na July 17 kpamkpam
Egosiputara: Yahoo ozi mechiri na July 17. Chọpụta ihe banyere njedebe nke ngwa ahụ nke ga-abata ntakịrị karịa nkeji.
Egwuregwu kacha mma Dragon Ball maka gam akporo
Anọ kacha mma Dragon Ball egwuregwu n'ihi na gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ a na ọtụtụ egwuregwu nke saga na Storelọ Ahịa Play-
[Ihe nkiri] OUKITEL K7 nwere batrị 10.000mAh na-anwale nnwere onwe
Anyị na-ekwu maka OUKITEL K7, igwe na-ahụ maka akụnụba na nke siri ike nke na-abịa na nnukwu batrị 10000mAh nke na-ekwu na, n'agbanyeghị nnukwu batrị ọ na-ebu n'ime, ọnụahịa ya ga-aba uru na arụmọrụ ya ma ọ bụ nke igwefoto.
[APK] Etu esi ewunye Igwefoto Google na-enweghị mgbọrọgwụ
Bara uru video nkuzi nke m na-akụziri gị otu ibudata ma wụnye igwefoto Google na-enweghị mkpa maka mgbọrọgwụ, naanị akwụkwọ ntuziaka nbudata na ntinye nke ngwa na ngwa ngwa.
Beta nke abụọ nke gam akporo P abatala: ndị a bụ akụkọ ya
Android P Beta 2: Akụkọ banyere ụdị ọhụrụ ahụ. Chọpụta ihe banyere ihe dị ọhụrụ na sistemụ ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Esi ewepu foto panoramic na 3D dị ka Huawei P20 PRO na gam akporo ọ bụla
Video-post nke m na-akọwa otu esi ese foto panoramic na 3D dị ka Huawei P20 PRO dị ugbu a maka gam akporo ọ bụla, anyị na-akọwa otu esi enweta ya n'ụzọ dị mfe.
Memoji bụ azịza Apple nyere Samsung's AR Emoji
Companylọ ọrụ nke Cupertino ewebatala atụmatụ ọhụụ akpọrọ Memoji, nke doro anya nke sitere na sistemụ emoticon a na-ahụkarị nke nwere ihu anyị sitere na AR Emojis nke Galaxy S9.
Ọnwụ nke ngalaba mbadamba nkume nke Storelọ Ahịa Google bụ ahụhụ
Twobọchị abụọ ka o nwusịrị, Google egosila ngalaba ngalaba mbadamba ọzọ, na-ekwupụta na mfu bụ njehie kọmputa.
Ngwa kacha mma gam akporo iji kpọọ piano
Ihe anọ kacha mma gam akporo iji kpọọ piano. Chọpụta ngwa anọ ndị a nke ị ga-esi mụta ịkpọ egwu piano n'ụzọ dị mfe na ekwentị gam akporo gị.
Egwuregwu ọhụrụ kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu ọhụụ ise kachasị mma maka gam akporo - June 2018. Chọpụta nhọrọ a nke egwuregwu ọhụrụ ndị ka dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play.
Etu esi dezie ma tinye saịtị na Google Maps maka gam akporo
Etu esi tinye ma dezie saịtị na Google Maps na gam akporo. Chọpụta usoro ị ga - agbaso iji nwee ike idezi n'okporo ámá ma ọ bụ ebe dị mfe na ngwa maapụ Google na ekwentị gị.
Ndị mmepe ga-enwe ike igbochi ngwa maka ekwentị gam akporo Go
Ndị mmepe ga-egbochi ngwa maka gam akporo Go. Chọpụta ihe banyere mkpebi a nke na-achọ igbochi ndị ọrụ nwere ekwentị dị ala iji budata ngwa ndị anaghị arụ ọrụ nke ọma na ekwentị ha.
Egwuregwu Batman kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu Batman anọ kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ egwuregwu a nke nwoke batrị si na DC Comics.
Otu esi egbochi kọntaktị ekwentị gam akporo gị ka ị ghara ịla n'iyi
Otu esi echekwa ma ọ bụ weghachite kọntaktị gam akporo. Chọpụta ụzọ anyị nwere ike iji zere ịhapụ ndị kọntaktị anyị nwere na ekwentị.
Egwuregwu gam akporo sitere na Minecraft
4 gam akporo egwuregwu mmụọ nsọ site Minecraft ịke. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ndị a nke sitere n'ike mmụọ nke egwuregwu a ma ama, ọkachasị ndịna eserese.
Bara uru ngwa Android maka oge okpomọkụ a
Ise bara uru gam akporo ngwa maka oge okpomọkụ a. Chọpụta ngwa ndị a nke ọ ga-adịrị gị mfe ịhazi oge ọkọchị gị ma nwee ọ yourụ karịa ezumike gị.
Ngwa kachasị mma ịgbaso 2018 Soccer World Cup
Ngwa anọ kachasị mma iji soro Soccer World Cup 2018. Chọpụta ngwa ndị a ka ị mara mgbe niile banyere ihe na-eme na Russia na iko ụwa a n'afọ a.
Chrome 67 maka gam akporo biara na eziokwu
Chrome 67 na-eweta eziokwu na eziokwu na gam akporo na Android. Chọpụta ihe banyere mmelite ihe nchọgharị ọhụrụ, nke na-ahapụ anyị na njirimara na mmelite ọhụrụ dị iche iche.
Google Lens gbasaa na ekwentị niile akwadoro
Google Lens amalite ịbịaru na igwe gam akporo dakọtara. Chọpụta karịa gbasara mgbasa nke Lens na ekwentị ọhụrụ, nke ga-abata na Spain.
LG G6 na-emelite gam akporo 8.0 Oreo na Spain
LG G6 na Spain na-emelite gam akporo 8.0 Oreo. Chọpụta ihe banyere mbata nke mmelite na njedebe dị elu n'afọ gara aga, mgbe ọnwa nke ndị ọrụ na-echere.
Pectdị egwu egwu dị egwu dị na mpaghara na nkwanye kpamkpam n'efu
A na-akpali akpali free gụgharia na obodo music ọkpụkpọ nke ga-ahapụ gị na ọnụ gị oghe maka ihe niile ọ na-enye anyị, n'ihi na nke jụụ interface na n'ihi na anyị nwere ike mbupụ anyị YouTube listi ọkpụkpọ iji na-ege ntị ọdịyo ọbụna na ihuenyo anya.
MIUI 10: Xiaomi ohuru nke idozi ohuru di ebe a
MIUI 10: Xiaomi oyi akwa ohuru. Choputa ihe ohuru ndi ohuru a puru ime ka anyi juo n 'uzo ohuru dika gam akporo P.
Ekwentị Nokia niile ga-emelite gam akporo P
Ekwenye: Ekwentị Nokia niile ga-emelite gam akporo P. Chọpụta ihe banyere akụkọ a nke na-egosipụtakwa ọzọ na akara ahụ bụ nke na-eme nke kachasị mma maka mmelite.
Mmelite nche kachasị ọhụrụ nke Galaxy S9 na S9 + na-enye anyị ohere ịdekọ oku
Mmelite nche ọhụrụ maka Galaxy S9 na Galaxy S9 + na-arụ ọrụ nke na-enye anyị ohere ịdekọ oku ekwentị anyị mere.
Weather Live PRO ugbu a n'efu naanị ụbọchị 7 !!
Ugbu a ị nwere ike ibudata ngwa ngwa Live Live PRO, otu n'ime ngwa amụma ihu igwe kachasị mma, n'efu naanị ụbọchị 7, si otú a na-echekwa gị karịa Euro 4 nke ego ọ na-akwụkarị.
OnePlus na-ewepụ ọrụ mgbe niile na Ngosipụta n'ihi oke oriri batrị
Companylọ ọrụ Asia kwadoro site na ọrụ nkwado ọrụ aka ya na ọ kwụsịrị ọrụ AOD n'ihi oke oriri batrị.
Samsung gaputara Ka Nwelite Nche maka 8 Galaxy Note
Companylọ ọrụ Korea bụ Samsung ka tọhapụrụ, n'ụwa niile, mmelite nche nke May 2018 maka 8 Galaxy Note
Huawei Enwe 8e: njedebe ọhụrụ nke ụlọ ọrụ nwere gam akporo 8.1 Oreo
Huawei wetara anyị Huawei Enwe 8e, ọhụụ ọhụrụ dị ala site na Eshia na ụdị ọhụrụ nke gam akporo os. Ekwentị a na-abịa nke ọma, nke ọnụnọ nke otu plọg nke usoro 18: 9 dị mma ma dị nro nke anyị nwere ekele maka ya.
Google Play Newsstand na-apụ n'anya na Spain
Akwụkwọ akụkọ Google Play na-apụ na Spain na-enweghị ọkwa ọkwa. Chọpụta ihe banyere njedebe nke ọrụ ahụ nyere gị ohere ịdenye aha na magazin na Spain, na-enweghị ọkwa site na Google.
Ngwa gam akporo kacha mma ịmụ French
Ngwa anọ kachasị mma iji mụọ French. Chọpụta ngwa ndị a nke ị ga-eji nwee ike ịmụ French n’asụsụ ekwentị gam akporo gị.
Egwuregwu Pinball kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu pinball anọ kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ a na egwuregwu ndị kachasị amasị n'ime ụdị nke ọtụtụ ga-amasị.
Ngwaọrụ gam akporo kacha mma maka ịgagharị
Anọ kacha mma gam akporo ngwa ọdịnala maka njem. Chọpụta nhọrọ a nke ngwa gam akporo iji banye na okike ga-adị gị mma nke ukwuu.
Ngwa kachasị mma iji mụta German na gam akporo
Ngwa anọ kachasị mma iji mụta German na gam akporo. Chọpụta ngwa ndị a nke ị ga-eji nwee ike ịmụ asụsụ ahụ n'ụzọ dị mfe.
Egwuregwu Sudoku kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu Sudoku anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere aha kachasị mma nke egwuregwu Japanese ama ama nke na-ekpori ndụ na ụwa niile.
Ngwa kachasị mma maka ịbịaru na gam akporo
Anọ kacha mma ngwa ise na gam akporo. Chọpụta ihe banyere nke a nhọrọ nke ngwa na-enwe ike ịdọrọ na gị gam akporo ekwentị na ala.
Vivo Y83: Ọnọdụ ntinye ọhụụ na gam akporo 8.1 Oreo
Vivo Y83: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị. Chọpụta ihe banyere ekwentị ọhụrụ ahụ site n'aka ndị na-emepụta ihe na China nke ruru ọkwa nbanye.
Etu esi eji ike ịmalitegharị na ekwentị batrị na-enweghị ewepu
Otu esi amanye ịmalitegharị ekwentị na batrị na-enweghị iwepu. Chọpụta otu esi eji ọrụ a na ekwentị ndị ahụ enweghị batrị mbugharị ọdịnala.
Etu ị ga-esi mee mmegharị ahụ na ihuenyo P gam akporo ma ọ bụ iPhone X. (emelitere, ugbu a ọ na - arụ ọrụ yana ọnụ ya na mmanya igodo)
Free ngwa maka gam akporo nke anyị ga-enwe mmegharị ahụ na ihuenyo dịka Android P ma ọ bụ Apple iPhone ip X n'onwe ya.
Ndụ Jurassic World: The Pokémon GO nke dinosaurs dị ugbu a maka gam akporo
Ndụ Jurassic World dị ugbu a maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere egwuregwu ọhụrụ na usoro na-abịarute tupu mmalite nke ihe nkiri ọhụrụ ahụ nke ga-akụ ihe nkiri na June. A kọwara egwuregwu a dị ka Pokémon GO na dinosaurs.
Face Kpọghe ngwa plus olu
Anyị nyochaa n'ụzọ zuru ezu ma ihe ọma na ihe ọjọọ, a echiche nke ọdịdị unlocking ngwa ọzọ olu karịa eziokwu yiri m karịa ihe na-akpali
WhatsApp na-enye gị ohere zoo foto ị nwetara na gallery
WhatsApp na-enye anyị ohere zoo foto anyị nwetara na gallery ahụ. Chọpụta karịa maka atụmatụ ọhụrụ dị na beta maka ngwa izipu ozi.
Ọrụ nke kọntaktị ogbi na-abịa na Instagram
Instagram ga - ekwe ka anyi mechie kọntaktị na ngwa ọhụrụ ya. Mụtakwuo maka njirimara kọntaktị ogbi ọhụrụ iji kwụsị ilele ọkwa ha na-enweghị igbochi ma ọ bụ hichapụ onye ahụ.
MIUI 10 ga - abia na May 31 ya na Xiaomi Mi 8
A ga-ewepụta MIUI 10 na May 31. Chọpụta ihe banyere mbata nke ọkwa ọhụụ nke ekwentị Xiaomi nke ga-abata na mmemme nke akara ndị China zubere.
OUKITEL K7: Ama dị ọnụ ala karịa batrị 10.000 mAh
OUKITEL K7: Ekwentị ọhụrụ nwere batrị 10.000 mAh. Chọpụta ihe banyere ika ọhụrụ ngwaọrụ na-anọchi ya nnukwu batrị.
Android P maka ụlọ ọrụ: Ndị a bụ isi akụkọ
Akụkọ niile gam akporo P na-eweta maka ụlọ ọrụ. Chọpụta mgbanwe nke ụdị sistemụ arụmọrụ a na-ahapụ maka ndị ahịa azụmaahịa, nke mere ka ọtụtụ kwenye.
Akụkọ dike nke Dragon Ball dị ugbu a na Storelọ Ahịa Play
Younwere ike ibudata Dragọn Nkata Akụkọ Ochie si Storelọ Ahịa Play. Chọpụta ihe banyere mbata egwuregwu a ma ama sitere na Japanese saga na ngwaọrụ gam akporo.
Samsung Galaxy J6: Ntinye uzo nzo na gam akporo Oreo
Samsung Galaxy J6: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta. Chọpụta ihe banyere ekwentị ntinye ọhụụ ọhụrụ site na akara Korea, ekpughere taa.
Ejirila Microsoft Okwu maka gam akporo ugboro 500
Microsoft Okwu ebudatara ugboro 500 ugboro na gam akporo. Chọpụta karịa otu ngwa Microsoft si nwee ihe ịga nke ọma na ekwentị gam akporo.
Egwuregwu hockey kachasị mma maka gam akporo
Egwuregwu hockey anọ kacha mma maka gam akporo. Chọpụta nhọrọ nke egwuregwu a nke ị nwere ike ibudata ugbu a na Storelọ Ahịa Play.
Otu esi amanye mmelite na ekwentị gam akporo
Etu esi amanye mmelite na ekwentị gam akporo gị. Chọpụta usoro anyị ga - agbaso iji mee ka mmelite dị na ekwentị gam akporo gị.
Ndị ọzọ kachasị mma Google Tasks
Ihe anọ kachasị mma na Android na Google Tasks. Chọpụta ngwa ndị a nwere ike ịbụ ezigbo nnọchi maka ngwa Google.
Ndụmọdụ na usoro iji nweta ọtụtụ ihe na gam akporo TV
5 atụmatụ na usoro iji nweta ọtụtụ ihe na gam akporo TV. Chọpụta ndụmọdụ na usoro ndị a ga - enyere gị aka ịnwe ọtụtụ TV na gam akporo TV.
Egwuregwu poker kacha mma maka gam akporo
Egwuregwu poker anọ kachasị mma maka gam akporo. Chọpụta ihe banyere nhọrọ egwuregwu a nke anyị dị ugbu a maka gam akporo.
Oreo update maka Galaxy S7 na S7 + dị ọzọ
Twobọchị abụọ wepụsịrị ikpeazụ gam akporo Oreo melite na Galaxy S7 na S7 Edge, ụlọ ọrụ Korea edozilarị njehie ahụ ma nye anyị ohere imelite ngwaọrụ ahụ ọzọ.
Ngwa kacha mma gam akporo iji zute ndị mmadụ
Ngwa ngwa gam akporo atọ kachasị mma iji zute ndị ọhụụ. Chọpụta ngwa ndị a maka ndị ọrụ chọrọ inwe ike izute ndị ọhụụ.
Otu esi emepụta okwuntughe siri ike maka ngwa gam akporo gị
Atụmatụ na usoro maka ịmepụta okwuntughe siri ike. Chọpụta ụzọ kachasị mma iji wuo okwuntughe siri ike na ekwentị gam akporo gị.
Ihe na-efu! Facebook na - ajụ anyị ugbu a ikikere mgbọrọgwụ
Ngwa Facebook na-ajụ ndị ọrụ maka ikikere mgbọrọgwụ. Chọpụta ihe banyere ahụhụ ahụ achọpụtara na ngwa ahụ na-ajụ ndị ọrụ ka ha nye ikikere mgbọrọgwụ.
[APK] Nbudata ma wụnye ihe ngosi kachasị ọhụrụ nke Dragon Ball Legends tupu ya adị na Storelọ Ahịa Play
Anyị enweworị Dragon Ball Legends APK dị maka ndị ọrụ anyị niile na obodo Androidsis, anyị na-agwa gị otu esi etinye egwuregwu ọhụrụ nke aha a ma ama ugbu a.
Etu esi etinye Huawei P20 egwu egwu na gam akporo ọ bụla
Vidiyo nkuzi nke m na-egosi gị otu esi etinye nwụnye egwu nke Huawei P20 n'ụdị gam akporo ọ bụla nwere ụdị 4.2 ma ọ bụ nsụgharị nke gam akporo.
Dragọn Naa Akụkọ Ochie tupu idebanye aha ugbu a meghere
Nga ndebanye maka Legend Ball Ball Legends na Storelọ Ahịa Play. Chọpụta ihe banyere oghere nke egwuregwu tupu ndebanye adịghị anya ga-abụ maka gam akporo igwe.
Samsung kwụsịrị mmelite ahụ gam akporo Oreo nke Galaxy S7
A manyere ụlọ ọrụ Korea nke Samsung iwepu gam akporo Oreo melite maka Galaxy S7 na S7 Plus na sava ya.
Android TV, ọ bara ya?
Ọ bụrụ n ’ị na - eche maka idozigharị telivishọn ochie gị, otu n’ime nhọrọ kacha mma dị na igwe onyonyo nwere gam akporo TV. Ihe gam akporo TV ọ bara uru? Kedu ngwa ndị enwere iji nweta ọtụtụ uru na ya? Chọpụta ya ebe a!
[APK] Download Shazam Lite
Nkuzi vidio nke m n’egosi gi otu esi etinye Shazam Lite n’agbanyeghi na idebe ya ala odighi na ulo ahia na obodo gi.
Nokia gosipụtara na Nokia 5 na 6 ga-enwe gam akporo P
Nokia 5 na 6 ga-enwe mmelite na gam akporo P. Chọpụta ihe banyere mmelite nke ga-abịa na ekwentị abụọ nke ika ahụ, nke ụlọ ọrụ ahụ ekwenyela.
Mirroring gam akporo: Esi ele ihuenyo gam akporo gị na PC, MAC, iOS ma ọ bụ ọnụ gam akporo ọzọ
Nkuzi vidiyo bara uru nke m na-akuziri ha otu esi enyo gam akporo, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ, lee ihuenyo gam akporo na PC ma ọ bụ ụdị ngwaọrụ ọ bụla, ọ bụ Windows, MAC, iOS ma ọ bụ ọnụ ọnụ gam akporo ọzọ.
Samsung Galaxy Tab S3 mmelite na gam akporo Oreo 8.0
Android 8.0 Oreo na-amalite ịbata na Galaxy